HappyZir Dental ZIRCONIA CRERES Nkwadebe Nkwado-News-VSmile Co., ltd
HappyZir eze ZIRCONIA okpueze Nkwadebe nduzi
Oge: 2021-07-20 ikwu:28
Ebe ọ bụ na ọ pụta n'ime ogige eze, Zirconia abụrụla ihe a na-ahọrọ maka ndị dọkịta chọrọ inye ndị ọrịa ha teknụzụ kachasị elu na teknụzụ.
Mgbe ọtụtụ afọ gachara ọrụ ike, Onyeoma Tochukwu Nnamani emeela ka ọ dịwanye mma site na iwebata ọtụtụ igwe pupe nwere nke na-enye ohere maka mgbanwe ndo dị elu na ntụgharị okwu nke yiri ezigbo eze. Na mgbakwunye na esthetics ka mma, njirimara Zirconia na-enye ohere maka ịdịte aka, ike, na mweghachi kwesịrị ekwesị. Iji mee ka ihe ịga nke ọma nke mweghachi Zirconia, ma belata oge oche, ọ dị mkpa iji hụ na a na-agbaso ụkpụrụ nduzi kwesịrị ekwesị.
Ihe mere ejikere ezé Ji Dị Mkpa
Ezigbo ọnụ na-ebute nrụgide dị ala na okpueze. Nchegbu a dị ala na-ebelata pasent nke fractures na-eme.
Mweghachi nke seramiiki chọrọ ka ọ dabara.
Edo Mbelata utịp ke ezigbo seramiiki ike.
Mbelata zuru ezu na-eduga na nsonaazụ kachasị mma.
Ihe nyocha dijitalụ na-agụ ihe ndị dị mfe karị na-emezi.
Ntuziaka nkwadebe maka okpueze Zirconia Anterior
iji Ugboro abụọ (White, Pre Shaded, Multilayer)eze zirconia mgbochi prepping eze n'ihi na ihe Zirconia ihu okpueze, ị ga-achọ ijide n'aka na enwere ohere zuru ezu maka mgbidi mgbidi iji nwee opekempe nke 0.3 mm na ọkachasị n'etiti 1.0 mm na 1.5 mm, ma ọ bụ 1.8 to 2.0 mm incisal ቅ. Ekwesịrị inwe chamfer gburugburu na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu yana mbelata opekata mpe 0.5 mm n'akụkụ oke gingival. Kehoraizin na vetikal nkwadebe nke eze kwesịrị inwe n'akuku nke mkpokọta 5 Celsius na bevel bụghị ihe amamihe. All incisal n'ọnụ ga-bụla na ị chọrọ iji belata linguals nke anteriors na football diamond ike a concave lingual.
Ntuziaka Nkwadebe maka okpueze Zirconia dị elu
iji Vsmile ST (White, Ihe mkpuchi) prepping a nha nha maka a posterior Zirconia okpueze, ị ga-mkpa iji hụ na e nwere zuru ezu ụlọ maka mgbidi ọkpụrụkpụ nwere a kacha nta nke 0.5 mm na kwesịrị n'etiti 1 mm na 1.5 mm ma ọ bụ 1.5 na 2 mm occlusal Mbelata. Ekwesịrị ịpịkọta ihe ndozi n'etiti 4 Celsius na 8 Celsius. Ọ ga-adịkwa mkpa ịnweta chamfer na-aga n'ihu na-aga n'ihu ma na-ebelata ma ọ dịkarịa ala 0.5 mm ka achọrọ n'akụkụ oke gingival. Dị ka nkwadebe maka okpueze ihu, a naghị atụ aro bevel. Gbaa mbọ hụ na emechiri emechi niile.
Ọ bụ ezie na njikere nke Ugwu na Chamfer bụ ihe kachasị mma, A naghị atụ aro nkwadebe nku nku, mana enwere ike ịnabata maka okpueze Zirconia zuru. Lelee ya na laabu ezé gị iji hụ ma usoro nrụpụta ha ọ ga-enye ohere maka ụdị ịkwadebe a, dịka ụdị Zirconia dị iche iche chọrọ ntuziaka dị iche iche.
Ihe ndị nwere ike ime ka okpueze ghara ịkwado mweghachi Zirconia
Iji bụrụ onye anabatara maka mweghachi okpueze Zirconia, nkwadebe ahụ ekwesịghị inwe ụzọ ọ bụla ma ọ gaghị enwe nkwadebe gutter. Abụọ ubu 90 Celsius na nhazi mgbidi dị mma anaghị anabata ya. Nkọpịa ma ọ bụ nke nwere oghere adịghị adabara maka mweghachi zirconia.
Ndabere ma ọ bụ Mweghachi Monolithic
Maka mweghachi n'ime mpaghara esthetic, Vsmile Multilayer Zirconia Mgbochi, ga-enye gị ezigbo nsonaazụ. N'ime afọ ole na ole gara aga, usoro poselin emeela ka ọ dịkwuo mma nke mere na usoro Zirconia nke ejirila ya na poselin mee ihe nwere ike ọ ga-agbawa ma ọ bụ mgbaji ụkwụ na nkwonkwo ma ọ bụ incisal. Agbanyeghị, ọ bụrụ na achọrọ oke ike n'ihi na onye ọrịa nwere bruxism, oke ntachi ma ọ bụ ebe enwere naanị njedebe anwansi, okpueze monolithic nwere ike bụrụ azịza kachasị mma. N'ihi ọhụụ monolithic zirconia (Vsmile HT ihe mgbochi siri ike nke zirconia), this type of crown is nearly unbreakable and built to withstand the harsh environment the back of the mouth endures better than all-porcelain crowns. Monolithic restorations are providing an increasingly aesthetic result with the introduction of High Translucency Zirconia reference, Ogige Vsmile ST Zirconia.
Maka okpueze Zirconia monolithic zuru oke, o kwesiri inwe ihe omimi di omimi nke 1.0 ruo 1.5 mm iji mezuo ihe omumu nke kwesiri. Ọ ga-adị mkpa ka ị hụ na mbelata nsị anụ arụ nke 1.0 ruo 1.5 mm, mbelata 0.5 mm gingival chamfer, mpempe akwụkwọ 6 ruo 8 na mgbidi axial, yana mbelata 1.0/1 nke ọgbụgba arụmọrụ. Maka ihe odide dị n'akụkụ, dozie chamger 3 na 0.3 mm iji nye ohere maka igwe igwe ziri ezi nke zirconia pre-sintered.
Mweghachi na ishingmecha Mweghachi Zirconia
A na-achọkarị ịmecha oke akụkụ mgbe ị dabara ma weghachi Zirconia mweghachi. A ga-ewepụ ciment gabigara ókè iji zere ihe e dere ede nke nwere ike iduga nha nha nha na ọrịa oge. Enwere ike ịmecha njedebe gingival site na iji ọnwụ, nke na-emecha mechie nchekwa nke ga-echebe anụ ahụ dị nro. Agbanyeghị na ndozi ndị a nwere ike ịdị ntakịrị ntakịrị mweghachi nke Zirconia, ọ kwesịrị ịdị mfe ịkpụcha, na -emepụta oke dị larịị.
Ọ bụrụ na achọrọ mmezi ọ dị mkpa iji ezigbo diamond na-adaba adaba maka mweghachi Zirconia. Oke oke ọkụ ma ọ bụ iwepụ site na mbelata iwe ike ga - eduga na micro-fractures na Zirconia. Ọ dị mkpa iji obere nrụgide dị ka o kwere mee iji belata oke ọkụ a na-emepụta, uabụ mmiri mgbe ị na-agbanwe agbanwe bụkwa ụzọ enyemaka iji mee ka mweghachi ahụ dị jụụ.
PREV: Mgba ọka ma ọ bụ igwe Wet
OSOTE : Dental Zirconia okpueze n'ichepụta ihe edeturu
Vsmile HappyZir UT Multilayer Zirconia Block dakọtara na Amann Girrbach Sistem
Vsmile Milling Burs Zirkonzahn ® M1 Soft Dakọtara
Vsmile HappyZir STML Multilayer Zirconia Block dakọtara na Zirkonzahn Cam System